६ महिनामै बिग्रिए कोरोना अस्पताल बुटवलका आईसीयू उपकरण
कोरोना विशेष अस्पतालले गौतमबुद्ध मुटु अस्पताललाई फिर्ता गरेका आईसीयू बेड । तस्वीर : विकास पराजुली/शिलापत्र
बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आईसीयूमा रहेका उपकरण ६ महिनामै बिग्रिएका छन् । आईसीयूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको वेवास्थाका कारण लाखाैँ रुपैयाँ पर्ने भेन्टिलेटरसहितका उपकरण बिग्रिएका हुन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको संरचनागत व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको चिकित्सीय व्यवस्थापनमा वैैशाखदेखि आईसीयू सेवा सुरु गरिएको थियो । तत्कालका लागि आईसीयूका उपकरण खरिद गर्न खरिद ऐन बाधक भएपछि प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाको पहलमा बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले आईसीयूका लागि चार वटा भेन्टिलेटरसहित आठ बेड प्रदान गरेको थियो ।
१ करोडभन्दा बढी लगानीको भेन्टिलेटर र बेड अस्पतालले आईसीयूका लागि प्रदान गरे पनि ६ महिनामै उपकरण काम नलाग्ने गरी बिग्रिएका छन् । तत्काल खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा आफूसँग भएका भेन्टिलेटर अस्पताललाई प्रदान गरेको भए पनि उपकरण बिगारेर फिर्ता गरेको गौतमबुद्ध अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए । ‘हामीले संकटको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उपकरण दियौँ । तर, त्यहाँ पठाएका उपकरण कामै नलाग्ने गरी पठाइएको छ,’ उनले भने ।
हाल गौतमबुद्ध अस्पतालमा रहेका आईसीयू र भेन्टिलेटर लामो समय राम्रोसँग चलेको भए पनि कोरोना अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीकै लापरबाहीका कारण उपकरण ६ महिनामै बिग्रिएका अध्यक्ष आलमको आरोप छ । कोरोना विशेष अस्पतालले फिर्ता पठाएका आईसीयू उपकरण अहिले गौतमबुद्ध अस्पतालले बाहिरै थन्काएको छ ।
अस्पतालका व्यवस्थापक कमल भण्डारीले भेन्टिलेटरका केही पाटपुर्जा नै नभएको बताए । ‘भेन्टिलेटरका कतिपय मनिटरले समेत काम गर्दैनन् । एउटा मनिटर त ड्यामेज नै भएको छ । बेड पनि कवार्ड जस्तै बनेर आएका छन्,’ उनले भने ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले कर्मचारीको बदमासीका कारण उपकरण बिग्रिएको भनेर आफूलाई समेत गुनासो आएको बताए । ‘हामीले प्रयोग भएका उपकरण अस्पताललाई नयाँ किनेर दिने सोच बनाएका थियौँ । खै कहाँबाट त्यस्तो हुन पुग्यो । यसले हामीलाई पनि लज्जित बनाएको छ,’ उनले भने ।
कोरोना विशेष अस्पतालका फोकलपर्सन डा. सुदर्शन थापाले भने काम गर्ने क्रममा भेन्टिलेटर बिग्रिएको भए पनि ममर्त गरेरै फिर्ता गरेको बताए ।
‘उहाँहरूले पनि हामीलाई नयाँ दिनु भएको होइन । बनाउँदै/चलाउँदै गरेको भेन्टिलेटर र बेड दिनुभएको थियो । हामी कहाँ पनि काम गर्ने क्रममा बिग्रिएको हो । ममर्त गरेर दिएका हौँ,’ उनले भने । डा. थापाले कामै नलाग्ने गरी भेन्टिलेटर बिग्रिएको भन्ने विषय सत्य नभएको बताए ।
धागो कारखानामा बुटवलका ३६ वटा संघसंस्थाको ४१ लाखभन्दा बढी रकम सहयोग गरेपछि आईसीयू सञ्चालनमा आएको थियो । हाल कोरोना विशेष अस्पतालको आईसीयूमा १० र भेन्टिलेटरमा दुई जना उपचाररत छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, १२:३७:००
साइबर फ्रडको सिकार बनेकी भारतीय वरिष्ठ पत्रकारको बयान, ‘म निधि राजदान, हार्वर्डको प्रोफेसर होइन तर.. साइबर फ्रडको सिकार बनेकी भारतीय वरिष्ठ पत्रकारको बयान, ‘म निधि राजदान, हार्वर्डको प्रोफेसर होइन तर..6min read
साइबर फ्रडको सिकार बनेकी भारतीय वरिष्ठ पत्रकारको बयान, ‘म निधि राजदान, हार्वर्डको प्रोफेसर होइन तर..6min read
विद्यार्थीमा भाइरल ज्वरो देखिएपछि विद्यालय बन्द2min read
मनीषा कोइराला ‘क्यान्सर एजुकेसन फन्ड’ ले खुलायो छात्रवृत्ति आवेदन2min read